कस्तो होला अफगानिस्तानको नयाँ सरकार ? – Nepal Japan
कस्तो होला अफगानिस्तानको नयाँ सरकार ?
नेपाल जापान १ भाद्र २२:०८
झण्डै २० वर्षपछि तालिवान विद्रोहीले जीत हासिल गरेपछि अफगानिस्तानमा बन्ने नयाँ सरकार कस्तो होला भन्ने चासो र जिज्ञासा सर्वत्र छाएको छ । नयाँ सरकारका बारेमा अफगानिस्तान, तालिबान र अन्तरराष्ट्रिय मामिलाका जानकारले आआफ्ना अनुमान सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
उनीहरुमध्ये अधिकांशले अफगानिस्तानमा फेरि पनि कट्टरपन्थी, रुढीवादी, अनुदारवादी र अलोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था लागू हुने अनुमान गरेका छन् ।
सन् १९८० को दशकदेखि नै विद्रोही कमाण्डर भए पनि उहाँको मुल पहिचान भने सैन्य कमाण्डरको रूपमाभन्दा पनि धार्मिक विद्वान अगुवाको रूपमा धेरै छ । त्यसैले उहाँले धर्मसँग जोडिएका धेरै आदेश दिने गर्नु भएको छ र उहाँका आदेशहरु धेरै कठोर हुने गरेका छन् ।